Ubudala Bedijithali Buguqula Ngokushesha Konke | Martech Zone
Uma ngikhuluma nabasebenzi abasebasha manje, kuyethusa ukucabanga ukuthi abazikhumbuli izinsuku ebesingenayo i-Intanethi. Abanye baze bangasikhumbuli isikhathi ngaphandle kokuba ne-smartphone. Umbono wabo wobuchwepheshe bekulokhu ukuthi uyaqhubeka nokuthuthuka. Sibe nezikhathi ezingamashumi eminyaka empilweni yami lapho intuthuko yezobuchwepheshe ixazululwe khona… kepha akusenjalo.
Ngikhumbula ngokusobala ngisebenza ngonyaka owodwa, iminyaka emihlanu kanye neminyaka eyi-1 yamabhizinisi engangisebenza kuwo. Manje, amabhizinisi abhekene nesikhathi esinzima sokubona ukuthi kwenzekani ngesonto elizayo - nevermind ngonyaka ozayo. Esikhaleni sobuchwepheshe bokumaketha, intuthuko engakholeki iyaqhubeka nokudlala indima, noma ngabe ngamadivayisi wekhompyutha womuntu siqu, idatha enkulu, noma ukumane kuhlanganiswe nokuhlanganiswa. Konke kuhamba futhi izinkampani ezingenawo amandla okuziguqula ngokushesha zishiywa ngemuva.
Isibonelo esisodwa esivelele semidiya. Izimboni zamaphephandaba, ama-video nezomculo zonke zikwazile ukufika ekuqapheliseni ukuthi umthengi noma ibhizinisi angakuthola lokho akudingayo online, futhi angakuthola ngemali encane noma angatholi nhlobo ngoba othile uzimisele ukunikela ngemali encane. Umyalo we-monolithic kanye nemibuso yokulawula eyakhiwe ayisakwazi ukugcina ukubambelela engcebweni yabo. Futhi njengoba bebengenawo umbono wokutshala imali esikhathini sedijithali, inhlanhla isukile. ngenkathi ukufunwa kukhuphukile empeleni!
Akukapheli, noma kunjalo. Asivame ukwabelana nge-infographics yobuchwepheshe, kepha ngikholelwa ukuthi izitayela ezikhulayo le infographic evela kuzo Abadayisi beNeeda ikhombisa intuthuko ethile okufanele ithinte umbono wakho wokuthi amabhizinisi akho azosebenza kanjani ngokuzayo. Futhi-ke, lokho kuzoba nomthelela emizameni yakho yokumaketha.
Tags: Ukuphrinta kwe-3dizibalo ezithuthukileisibikezelo sebhizinisiabaphathi abakhulu bemininingwaneizinduna ezinkulu zedijithaliikhompuyutha yamakhasimendengamafuukusebenzisa ikhompyutha yonke indawoizinhlelo ezicebile ngokwesimou-daryl plummerinfographicingqalasizindainternet sezintoizibalo ezingabonakalineedaabadinga ama-needaizibalo ezisabaleleukuphepha okususelwa engcupheniamarobhothiukuzivikelaimishini ehlakaniphileizinhlelo zokusebenza ezichazwe isoftwarei-intanethi yezintoisikali sewebhu IT
Izinganekwane Eziphezulu Eziyi-15 Zokumaketha i-imeyili Okufanele Uzazi
Dec 11, 2014 ngo-11: 19 PM
I-infographic yinhle !!!
Impendulo yamavesi wokubikezela inhle kakhulu. !!!!
I-Yups ngokuzayo isidingo sezindleko zokumaketha kwedijithali sizoncipha futhi ukuncintisana kuyaqhubeka kukhula.